Naseho ny : 27 jolay 2020
27 jolay — Ny Nathalie resahana eto dia ilay Nathalie maty martiry tamin’ny taonjato fahasivy, novonoina niaraka tamin’ny vadiny. Mafy tokoa manko ny fanenjehana ny kristianina tany Cordoue tamin’izany fotoana izany ka raha teo ho velona dia tsy maintsy mifindra musulman.
Anisan’ny niharan’izany fanenjehana izany i Nathalie sy i Aurèle vadiny niaraka tamin’i Félix sy i Liliose izay havan’izy ireo ihany koa. Indray andro nahita kristianina izy ireo nadaboka teo ambony apondra ka natodika tany amin’ny rambonin’ilay apondra ny endriny, naboridana io kristianina io, nokaravasian’ireo mpampijaly nanaraka azy mandram-paratrany, teo ihany koa ny orakoraky ny mpandalo. Fa i Aurèle sy i Nathalie nandritra izany tsy nitsahatra sy naneho ny finoany am-pahibemaso. Niseho teny an-dalam-be ary i Nathalie sy i Liliose tsy nisaron-doha, satria moa izany no fomba musulman tsy maintsy misarondoha ny vehivavy ary tsy mampiseho tava. Nosamborina izy ireo niaraka tamin’ny vadiny avy dia i Aurèle sy i Felix izany. Ary ny 27 jolay 852 niaraka tamin’ny mpitoka-monina iray nantsoina hoe Georges, dia notapahana ny lohan’izy dimy ireo. Marihana fa i Abd al-Rahman II no nitondra tany Espagne, Cordoue tamin’izany fotoana izany. Ny taona 853 dia nentina tany amin’ny Saint-Germain-des-Prés tany Paris ny reliques an’izy ireo.